Murphy ny Lalàna ho an'ny mpaka sary — Photo-Sales.com
Sale ny sary ao amin’ny Internet – vola Online
Murphy ny Lalàna ho an’ny mpaka sary
Ny fahazavana no tsy ampy, raha tsy rehefa be loatra.
Ny masoandro mamirapiratra amin’ny lafiny ratsy.
Foana ianao te-hifindra kely aloka
Fahazavana tonga lafatra dia tsy hitranga, afa-tsy ny raharaha. rehefa tapitra ny tselatra fiara, bateria.
Rehefa mitifitra andiam-tselatra eo ankavanana tselatra endriny tsy manasongadina.
Raha toa ny tselatra hevitra misongadina, dia tsy araka ny tokony.
Raha nametraka ny mazava sy ny masoandro – misy rahona.
Raha nametraka ny WB – ny lokon’ny fiovana ny jiro.
Raha mitifitra ao amin’ny sarotra izao (tsara, ohatra – ny mazava avy any amin’ny varavarankely + + fluorescent incandescent jiro takamoa) – izay no tsara indrindra amin’ny toe sangan ‘asa tsy hay ho mahazo ny fahazavana.
Raha toa ka tsy manana Diffuser ny tselatra – ny valin-drihana sy ny rindrina miloko foana.
Raha ny fitaovana rehetra ho an’ny ny tselatra – nihazakazaka avy amin’ny vatoaratra (nanam napetraka na any an-trano na navoaka).
ny family ny ratsy foana no loko.
Izany dia midika hoe ho mazava tsara ny sary raha tsy aorian’ny tsimoka mijery sary.
Flash karatra sy ny bateria farany toetsika marina iray eo anoloan’ny sangan’asa!
Ny tsara indrindra mampiseho eo anatrehanao – raha ny fakan-tsary nijanona an-trano.
ISO dia teny aorian’ny andianà sary (mazava ho azy teo 1600+).
Toe-javatra eny an-dalana hitifitra mihaja, kosa dia misarika ny tapa-kazon’i avy ao am-paosiny.
Autofocus notapahiny foana! (Marina, izany SLR kokoa)
Auto fotsy foana mizana mandainga amin’ny mpiasa sarobidy indrindra.
Ny tripod tsy raikitra tongotra iray sy ao amin’ny dingan’ny fitifirana alina ho afaka minitra vitsy ny hatsiaka dia manapa-kevitra ny handeha hatory.
Rehefa avy naka ny sary niseho avy ao ambadiky ny kirihitra ny tandrony Elk, sokafy ny family sarony.
Ao amin’ny asolo toerana voatendry ho tselatra amin’ny fotoana mety very bateria
Amin’ny fikarakarana batch hampidi Mombamomba Sharpe mahery sy endriky ny zavatra hita amin’ny firefodrefotry ririnina rantsankazo – Blue Rush.
Avy amin’ny fakan-tsary sy ny family fanamboarana, jereo izany amin’ny family hafa, ary rehefa afaka antsasak’adiny ny fanamboarana ny fanakatonana ny fanompoana, raha ny fandehany fa ny fakan-tsary family, napetraka tamin’ny fakan-tsary maty.
Taorian’ny fianianana ny fanompoana lehiben’ny fa rahampitso dia ho vonona ny zava-drehetra – natao roa volana, ary ny fanompoana roa fotoana miova adiresy
Camera ihany fiatoana amin’ny hariva, araka ny namoaka fanamboarana amin’ny aretina iray ihany.
Ny fiantohana fanamboarana eo amin’ny fanompoana (fandefasana isan-kerinandro ihany no tari-dalana ao amin’ny iray) raha ny fandehany fa rehefa avy manao ny iray, rava tanteraka ny zavatra hafa.
Ao amin’ny dingan’ny be pitsiny pirinty tao amin’ny efitra fandroana tamin’ny fotoana fandefasana ny taratasy ao amin’ny Developer, olona Nalefany ny fahazavana ho an’ny faharoa.
Ny tena taratasy dia lafo sary nanazava rehetra.
Raha misy 4 tripod amin’ny removable loha, ny loha tsy interchangeable.
Ny sivana lafo indrindra no tsy ampiasaina mihitsy.
Raha mangataka olona iray mba haka sary ny mpaka sary, ary hatolotro eo an-tànan’ny ny fakan-tsary, ny mpaka sary dia mifanitsy tsy misy lohany.
Raha ny fakan-tsary dia ampiarahina telephoto family, dia zavatra mahaliana ho tena akaiky. Toy izany koa, raha ny eran-fiolahana sary Mitovy amin’ilay family mbola – zavatra tena mahaliana handeha.
Raha toa ka tsy manana na Macro family Macro peratra – dia toy izany voninkazo lafo vidy, ny bibikely voasambotra
tripod, maka hihanika, tsy mahasoa … Tripod, hadino any an-trano, dia mila fotoana rehetra.
Mitsangàna eo ny milina izay ny nipoahan’ny lafo indrindra family lavo!
Rehefa mitifitra amin’ny Zoom foana isan-karazany dia tsy ampy ny
Mpanao pirinty sy ny mpanara-maso loko lainga. Mandrakariva. Fa isaky ny lalana vaovao. Noho izany, ny fisian’ny tsy foana izay tianao.
Loko ao amin’ny mpanonta no teo am-fotoana izay dia ilaina ny maika printy ny sary ny olona izay no tena tsy fahita firy.
Unique sary pirinty tantera-drano, ny ranomainty, olona dia nampihena na hilelaka.
Ny saka dia afaka jerena (intsony) solosaina amin’ny fotoana inopportune indrindra.
Megapixels ny isan’ny ao amin’ny fakan-tsary dia foana lehibe noho ny family mamela.
Be loatra ny hiatrehana, famindrana ny tabataba. Ary tena kely endriky ny zavatra hita sy ny vokatra pirinty.
Fanoloana ny fakan-tsary na ny fakan-tsary family ho 2 kilasy ambony, dia fantatrareo fa ny vaovao, tranainy famahana olana, mamorona vaovao be dia be, izay tsy ahiana.
Raha ny vatoaratra ao amin’ny fakan-tsary dia tsy ampy ho an’ny sary tsimoka, mividy hitsitsy – eto ny fanoloana tonga amin’ny mora raisina na oviana na oviana. Ary raha mbola mila, izany dia afaka.
3. Manaova sary.
Ny vondrona sary misy foana olona iray izay Manoaka ary dia mamarana ny masony.
Raha toa ka tsy misy Manoaka, dia olona sneezes.
Nanadio tsara zaza tamin’ny fotoana fitifirana nohosorana zavatra, ohatra sôkôla.
Raha manapa-kevitra ny hisambotra tsara endrika manintona nohosorana ny sokola, avy eo ny fotoana mandroso ny bokotra, paharainan’ny hamafa manintona endrika ambony indrindra ampahany amin’ny akanjo na ny toe-javatra.
Bird (na biby) dia vonona lalandava ny hipetraka eo anatrehan’i nitady hanala ny family satrony. Tena tsy mivadika ny miandry ny fakan-tsary dia vonona ny hitifitra ary niaraka tamin’izay dia hanjavona.
Nandritra ny sary tsimoka, ny miaraka modely dia vonona, vonona mpaka sary fiomanana fitaovana sy ny hevi– dia efa ho fahagagana.
Tamin’ny tsimoka modely ny sary avy amin’ny lamba, tsy mifanaraka amin’ny tontolo iainana (safidy – amin’ny mahaforona mamirapiratra hafahafa mazava sy ny tselatra).
Rehefa mitifitra modely any an-tokotany, ny isan’ny moka lavitra noho izay antonony.
Best tifitra nandritra ny sary tsimoka – ny voalohany, ary vao haingana indrindra, nalaina tao amin’ny kisendrasendra, fa tsy tsara naorina filanjana azy.
Raha ento miaraka aminao fiarovana ny ranonorana, dia ho maina. Raha ny elo (cover) ao an-trano, dia ny orana.
Rehefa mandeha be dia be ny olona teo amin’ny iombonana sary tsimoka, fa tsy ny olona tonga ka tsy amin’ny fotoana voatondro.
Plan fotoana sary tsimoka tsy afaka ny ho!
Misy mitady mba hipetraka teo amin’ny vatan-kazo.
Tamin’io fotoana io ao amin’ny kitapo faritra marefo indrindra.
Search sary koa in
maritrano sary lafika wallpaper HD fiaviana temotra tsara tarehy kanto hatsaran-tarehy kanto manga sary trano wallpaper HD loko sary Crimea sary kolontsaina hoso-doko andro wallpaper HD tontolo iainana sary Eoropa sary HD malaza sary ala ny wallpapers zaridaina sary HD maitso fanoharana colina ny wallpapers tantara clipart trano hoso-doko tontolo wallpaper HD ravina hoso-doko tendrombohitra voajanahary temotra toetra temotra antitra ny wallpapers ivelan'ny trano sary any an-tokotany sary Park sary fototra sary zavamaniry HD vatolampy wallpaper HD sehatra hoso-doko ranomasina sary vanim-potoana temotra lanitra hoso-doko vato HD fahavaratra sary fizahan-tany sary tilikambo fanoharana milamina sary Travel sary hazo sary View HD rano HD
Lisitry ny sary banky
Shutterstock (Ho an'ny mpaka sary)
Shutterstock (Fa mpividy ny sary)
© Copyright 30th of November 2021 10:56:18 All rights reserved Photo-Sales.com.